iinjini Project Airbus A321 uvale phantsi emva kokundiza
umbuzo iinjini Project Airbus A321 uvale phantsi emva kokundiza
I-2 iminyaka yama-20 iiyure ezidlulileyo #223 by JanneAir15
Molo! I ukulandwa Airbus A320 Family Pack Mega. Ndizilingile zonke imifuziselo (A318, A319, A320, A321) kodwa xa ukusuka kunye A321 iinjini yayo waluvala phantsi ngoko nangoko emva amavili usehla emhlabeni. Ezinye iinqwelo-moya yale pack azinayo le ngxaki ukuba kuphela kwi A321. Mna balandela uluhlu waza wajika iinjini kwi kunye nendlela echanekileyo. Andazi ukuba yintoni na engalunganga ngoko. Ndicela undincede nale.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Uhadi
I-2 iminyaka yama-20 iiyure ezidlulileyo #224 by Gh0stRider203
Andikwazi ukuyenza kangangoko ndihleli phakathi ekubalekeni njengoko sithetha (LFRG - KDFW) kwi 747-400LCF, kodwa xa ndithe ilizwe, ndiza download loo kwaye jonga kwi kuyo.
I-2 iminyaka yama-17 iiyure ezidlulileyo #225 by Tonny0909
Kufuneka ubeke ELAC2 Off kwi Icandelo FLT CTL- kwi panel upperhead. Okunye ezintathu ezibekwe ON. (Sec 2,3 ne FAC2)
Uze ufunde Airbus Imithetho moya:
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Gh0stRider203, JonesyMcJonesFace
I-2 iminyaka yama-16 iiyure ezidlulileyo #226 by JanneAir15
Enkosi kakhulu! Ndiza ukuhlola loo.
I-2 iminyaka yama-16 iiyure ezidlulileyo #227 by JanneAir15
Hayi, akazange asebenze. I ekusafuneka impazamo efanayo "Generator 1, Generator 2 kunye hydraulics 1 # 2" ziphawulwe ebomvu kwi kwidispleyi info.
I-2 iminyaka yama-14 iiyure ezidlulileyo #228 by JanneAir15
Akukho mfuneko ukunceda kwakhona! Ndakulusikelela le ngxaki. Tonny0909, wena ekunene kodwa ELAC2 kuphela FLT CTL uguqulela wena ube OFF. Ezinye itshintshela kufuneka ube phambili! (Kuquka icandelo ekhohlo yolawulo upperhead) Yiloo nto! Kodwa enkosi uncedo lwakho Tonny0909.
I-2 iminyaka yama-13 iiyure ezidlulileyo #229 by Tonny0909
Kulungile Ndathi ukuba post lam lokuqala:
"Ezinye iseti ezintathu ON. (Sec 2,3 and FAC2)"
Basikeleleni xa "OFF" akukho kuboniswe.
I-2 iminyaka yama-12 iiyure ezidlulileyo #230 by Dariussssss
Ndiyavuya ukubona le isonjululwe. Ukuba ufuna into, usazise.
I-2 iminyaka yama-9 iiyure ezidlulileyo #234 by Gh0stRider203
Dariussssss wabhala: Ndiyavuya ukubona le isonjululwe. Ukuba ufuna into, usazise.
ENDE umbulelo Tonny0909 uncedo lwakhe!
Ixesha ukwenza page: 0.235 imizuzwana